Michato 2022 - Iwo makuru maitiro ekushongedza | Bezzia
Susana godoy | 13/05/2022 16:00 | Muchato
Michato ya2022 yave kutotanga, saka tinofanira kuziva kuti ndeapi maitiro makuru ekushongedza ari kutsvaira. Sezvo zvinenge zvechokwadi vachakupa akatevedzana mazano kuti vakwanise kukurudzira muchato wako mavari. Kana ari maitiro, anoparadza uye isarudzo dzinopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo.
Saka, kana iwe uchida zvese izvo pazuva rako guru, haugone kubatsira asi kusangana navo. Ichokwadi kuti zvose zvakatenderedza muchato ndezvemunhu oga. Saka zvakanakisa zvatingaite ndezve tora maitiro aya sekurudziro uye woawedzera kumuchato wedu zvinoenderana nezvatinoda. Chokwadi unogona kuzvichinjira kune zvawanga uchifungidzira kwezuva rako rakakosha!
1 Chiedza uye mavara echisikigo emichato 2022
2 Mwenje unotakurwa nemwenje unorembera
3 Akasanganiswa matafura mukushongedza kwemuchato 2022
4 Bet pakuronga vaenzi nenzira yepakutanga
Chiedza uye mavara echisikigo emichato 2022
Dingindira remavara rinogara riri rimwe reanonyanya kutaurwa. Asi munyaya iyi zvinoratidzika kuti kuzvipira kune toni dzisina kwazvakarerekera kuri kuuya kwakasimba. Saka ese machena uye beige uye akareruka shades achawedzerwa kune palette yezvisarudzo. Nekuti izvo zvaunoda kuwana inzvimbo yakasarudzika, yakabatana nehunhu hwakatitenderedza. Nechikonzero ichi, isu tichasiya kumashure anonyanya kushamisa mavara kuti ape nzvimbo dzakaenzana. Ehe, kana iwe uchida kuwedzera imwe inoyevedza hue, iwe unoziva kuti iwe unogona kugara uchiigadzirisa zvinoenderana nezvaunofarira.
Mwenje unotakurwa nemwenje unorembera
Kuvhenekera ndeimwe yezvikamu zvakakosha kana zvasvika pakushongedza muchato. Nemhaka yokuti tinogona kuhushandisa kupa kunyange kutanhamara zvikuru kumabiko. Kuenderera mberi nekupedzisa kwechisikigo, isu takatarisana nesarudzo apo mwenje inorembera ichave ma protagonists chaiwo. Asi kwete zvakanyanya kupenya, asi ivo vanozove nekupedzisa girazi kunoita kuti ive neinoyevedza kupera. Zvechokwadi, makenduru anovawo mamwe emashoko anokosha. Saka kuti pasave nematambudziko, unogona kuaisa mukati megirazi mavhasi, ichipa kushongedza mhepo yakanyanyisa.
Akasanganiswa matafura mukushongedza kwemuchato 2022
Kwemakore mashoma ikozvino, ivo vanoda kutyora neprotocol. Sezvo chinhu ichi chekuva nematafura akareba, nguva dzose akaparadzaniswa nemwenga nemwenga, haisi nguva dzose chimwe chinhu chinoguma chichifarirwa muzviitiko zvakawanda. Saka, panogona kuva nekubatanidzwa kwematafura akareba uye akatenderera. Uyezve, yave ichiita kwenguva yakati zvino uye zvinoita sekuti icharamba ichibudirira. Uyezve, mwenga nechikomba havagari vachigara namwari, asi pese paunoona vari patafura vari vega. asi pedyo nevaenzi, kana kunyange kune mumwe nomumwe. Iwe unofanirwa kugara uchisarudza izvo zvinonyanya kunaka kune mumwe nemumwe murume, asi ichokwadi kuti maprotocol anoita seakasiiwa parutivi.
Bet pakuronga vaenzi nenzira yepakutanga
Kwapera matafura aya aive nenhamba uye mune imwe neimwe maive nevaenzi vakati wandei vakaungana. Zvakanaka, mavambo akaiswa mumuchato wose unozviremekedza. Nokudaro, panzvimbo yenhamba idzi unogona kuzviisa nguva dzose kuisa patafura yega yega mazita enziyo kana mafirimu uye kunyangwe mazita evatambi. Chero chinhu chinoenda sekunge kuri kupedzisa pfungwa nenzira yepakutanga. Zvinoita sekuti gore rega rega mitsva iri parutivi rwedu uye nefungidziro shoma vanogona kuramba vachipfuura kubudirira. Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kugara uchiisa cork kwaunoburitsa rondedzero yese nemazita kana, patafura yega yega, isa imwe tsanangudzo inotsanangura zita rayo. Izvozvo hazviiti sepfungwa huru here? Ipapo iwe unogona kuenda kune iyo mukushongedza kwemuchato 2022
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Muchato » Mafambiro makuru mukushongedza kwemuchato 2022